Inona no ho hita any Seville ao anatin'ny roa andro | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | Inona no ho hita, Sevilla
Sevilla, Tanàn-dehibe iza! Io no iray amin'ireo tanàna tsara tarehy sy notsidihina indrindra any Espana, misy mponina marin-toerana ary be dia be ny mahita, manandrana, mitsidika ...
Ahoana anefa raha mandalo fotsiny isika? Handiso fanantenana zavatra maro ve isika? Azo antoka fa efa ela no fantatry ny tanàna toa an'ity, fa afaka 48 ora dia afaka mijery isika fa te hiverina. Ny lahatsoratray anio, araka izany inona no ho hita any Seville ao anatin'ny roa andro.
2 Inona no ho hita any Seville
Araka ny nolazainay dia tanàna be mponina izy io, tanàna sy renivohitry ny Community Autonomous of Andalusia.
Manana a tanàna taloha izay lehibe indrindra any Espana ary iray amin'ireo lehibe indrindra eran'i Eropa ka mahatalanjona ny habetsahan'ny harena manorina sarobidy ao aminy.
Sevilla 530 kilometatra monja miala an'i Madrid izy io ary izy io dia mifandray tsara amin'ny rivotra sy ny tanety. Raha manapa-kevitra ny hampiasa ny fiara fitateram-bahoaka Lazaiko aminao fa manana toby roa lehibe io. Ny lehibe indrindra dia ny Plaza de Armas izay misy dia nasionaly sy iraisam-pirenena ary avy eo ny gara bus Prado de San Sebastián izay miasa eo amin'ny faritra ihany.
Raha mpizahatany ianao ny fomba tsara indrindra hahatongavana any dia mety ny lamasinina haingam-pandeha, AVE. Ity fitaterana ity dia mampifandray an'i Seville amin'i Madrid farafahakeliny 20 isan'andro, mandehandeha ary ny dia manontolo dia maharitra adiny roa sy sasany.
Azonao atao koa ny mampifandray an'i Seville amin'i Barcelona amin'ny alàlan'ny mandalo an'i Zaragoza afaka adiny dimy sy sasany na adiny iray latsaka avy any Valencia. Ny gara no Santa Justa ary toerana tena tsara satria lavitra ny lavitra ny tanàna taloha.
Mazava ho azy fa afaka mandray koa ianao lamasinina eo an-toerana mankany amin'ny tanàna sy tanàna hafa manodidina. Raha ny fitsidihanao an'i Seville dia satria mitety an'i Espana ianao dia raiso ny Renfe Spain Pass, ny lalan'ny fiaran-dalamby izay mamela ny fampiasana ny AVE lavitra sy lavitra.
Ity pass ity dia maharitra iray volana amin'ny dia voalohany ary misy izany kinova efatra: dia 4, 6, 8 ary 10. Azonao atao ny mividy azy hatramin'ny enim-bolana mialoha sy amin'ny kilasy roa, Business / Club na Tourist. Ho tonga amin'ny fiaramanidina ve ianao? Ary ny seranam-piaramanidina dia 10 kilometatra avaratra ary afaka mankany an-tanàna amin'ny taxi ianao na bus. Mamelà antsasaky ny adiny iray mahery handehanana.
Araka ny efa nolazainay tany am-piandohana, ny marina dia tanàna Seville izay elaela vao tena fantatra satria be dia be izy io, nefa be ny fahagagana… Nefa marina ihany koa fa fohy ny fotoana indraindray ary vorona fotsiny isika ny andalan-teny.
Ka inona no azontsika esorina amin'ity tanàna Espaniola tsara tarehy ity? Eny, izay tsy maintsy fantatrao na eny na eny no nambaran'ny UNESCO Lova Iraisam-pirenena; ny Giralda, ny Real Alcázar ary ny Katedraly.
La Giralda an'ny Seville Izy io dia tilikambo goavambe izay tsy maintsy efa ela ny tranobe avo indrindra amin'ny tontolo fantatra. Manontany tena ny refy. Alao an-tsaina izany toa ny endrik'ireo olona tamin'ny taonjato faha-XNUMX! eFA 101 metatra ny haavony.
Tsy inona izany fa ny tilikambo lakolosin'ny Katedraly Seville ary talohan'izay dia ny minaretan'ny Almohad amin'ny moskea izay tsy misy intsony ankehitriny. Mitovy amin'ny minaretan'ny moske Koutoubia any Maraoka izy io saingy manana famaranana amin'ny fomba Renaissance izay tamin'ny taonjato faha-XNUMX, mitovy amin'ny tilikambo lakolosy.
Ny Giralda manana lakolosy 25 ary samy manana ny anarany avy izy rehetra. Ny rafitra dia misy vatan'olombelona mihetsiketsika telo ary ny roa ampahatelon'ny farany dia avy amin'ny minaret tamin'ny taonjato faha-XNUMX, fa ny tapany ambony kosa dia avy amin'ny Kristiana.
Ambonin'ny zavatra rehetra dia ny Giraldillo, sarivongana varahina izay miasa ho toy ny vanin-toetr'andro ary izany dia mendrika ny angon-drakitra, sary sokitra varahina lehibe indrindra amin'ny Renaissance eropeana. Ity vanin-toetr'andro ity tokoa no manome ny anarana hoe Giralda satria avy amin'ny matoanteny izy mihodina. Ny fahitana avy any ambony dia zavatra jerena ary ny tohatra, natao hihanika eo ambadiky ny soavaly, dia tsy dia taraiky aoriana.
Ny Katedraly Seville dia tranon'ny Gothic goavambe. Nanomboka namboarina tamin'ny 1433 tao amin'ilay tranokala izay nibodo moske ihany koa ary na dia vita tsy ho ela aza ny asa dia nampiana ny haingon-trano rehefa mandeha ny fotoana ka tena manana fomba maro.
Inona no hita ao amin'ny katedraly? Ilay Tokotanin'ny hazo Orange, tokotany anatiny tsara tarehy izay misy ny volan'ny tempoly, ny Trano fiangonana mitazona fasana mpanjaka maromaro ary manana ny sarin'ny Patroness of Seville, ny Virgen de los Reyes, sary hosodoko nataon'i Murillo sy ny sisan'i Christopher Columbus.
El Royal Alcazar an'ny Seville lapan'ny mpanjaka io ary any Eropa no lapa tranainy indrindra izay mbola miasa. Ny asa dia nanomboka tamin'ny 713 raha teo ny Arabo, ary namorona endrika hafa taorian'ny Christian Reconquest tamin'ny 1248.
Mbola misy ampahany aminy ankehitriny Toeran'ny Mpanjaka any Espana izy io, toy ny tamin'ny andron'i Ferdinand III avy any Castile sy ny maro hafa. Ny fivoriana sy ny hetsika amin'ny karazany isan-karazany dia matetika voalamina ary afaka mitsidika azy ny mpizahatany, miaraka amin'ireo zaridaina ao anatin'ilay fitsidihana. Maimaimpoana ny fidirana.
Fa inona no ho hita ao amin'ny Real Alcázar? La Efitry ny Mpanjaka, ny Efitrano Emperora izay misy taila taonjato faha-XNUMX sy ny ravina Flemish isan-karazany, ny Efitra Carlos V, ny Lapan'ny masoivoho miaraka amin'ny dome tsara tarehy feno arabesque volamena, ny antony miaraka amin'ireo tanimbary maintso, pavilions sy loharano ary hazo fihinam-boa ary mazava ho azy, ny Patio de las Doncellas.
Amin'ny ankapobeny dia ity no zavatra tsy azonao adino ao Seville. Mazava ho azy fa hanampy zavatra maro hafa aho fa ny roa andro dia tsy fotoana lava. Raha manana angovo sisa ianao ary tianao ny mifangaro amin'ny mponina dia afaka mandeha mitsangatsangana ianao Faritra manodidina an'i Triana, eo amoron'ny reniranon'i Guadalquivir, miaraka amina fiaviany tena taloha, miaraka amin'ny tetezana malaza, ny tsena ary ny sisa tavela amin'ny Castillo de San Jorge.
Na afaka mitsidika ny Tanàna manodidina an'i San Bernardo, mandao ny tanàna taloha amin'ny alàlan'ny Puerta de la Carne. Izy io dia tranokala taloha misy arabe sy trano taloha, ilay toerana nipetrahan'ny tafik'i Fernando III tamin'ny andron'ny Reconquest.
Na inona na inona hitanao, dia azo antoka fa hianjera ianao ary te hiverina ianao, fa izany no toetran'i Seville.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Sevilla » Inona no ho hita any Seville ao anatin'ny roa andro